Zyro: Gadzira Yako Saiti Zvirinyore Kana Chitoro Chepamhepo neiyi Inodhura Platform
China, November 11, 2021 China, November 11, 2021 Douglas Karr
Kuwanikwa kwemapuratifomu ekushambadzira anodhura kunoramba kuchifadza, uye zvemukati manejimendi masisitimu (CMS) haana kusiyana. Ndakashanda mune akati wandei, akavhurika-sosi, uye ndakabhadhara CMS mapuratifomu mumakore… zvimwe zvinoshamisa uye zvimwe zvakaoma. Kusvikira ndadzidza izvo zvinangwa zvevatengi, zviwanikwa, uye maitiro, ini handiite kurudziro papuratifomu yekushandisa. Kana iwe uri bhizinesi diki risingakwanise kudonhedza makumi ezviuru zvemadhora pairi
Mumwe waanoshanda naye akandisheedza kubva kubazi rekushambadzira achikumbira mazano apo aitaura nebhizinesi raivaka iro pacharo online chikuva. Sangano rakagadzirwa nevatambi vane tarenda rakakura uye vaive vasingagone kushandisa zvemukati manejimendi system (CMS)… pachinzvimbo kutyaira kushandisa yavo-yavo yekurima mhinduro. Chinhu chandakambonzwa… uye ini ndinowanzo kuraira ndichipesana nacho. Vagadziri vanowanzo tenda kuti CMS ingori dhatabhesi
Iyi ndiyo imwe yenyaya dzandiinadzo dzine rudo rwakaomarara kana zvasvika kune vatengi vangu. Nharembozha maapplication anogona kunge ari mamwe eaya marongero anoenderera nekuve nemitengo yepamusoro uye kudzoka kwakadzikira mukudyara kana kwaitwa zvisina kunaka Asi kana yaitwa mushe, ine kupenga kwakakwirira kutora uye kuita. Mazuva ese anenge zana maapplication akaiswa kumusika, kunze kweayo makumi matatu neshanu muzana anoita zvinokanganisa mumusika.